MYSTERY ZILLION Gathering — MYSTERY ZILLION
MYSTERY ZILLION Gathering
May 2016 edited May 2016 in MZ News
မတွေ့တာ ကြာကြပြီဖြစ်လို့ဆိုပြီး အမှတ်တရ ရှိနေကြသေးတဲ့ Member ကြီးတွေက Gathering လုပ်မယ်လို့ ပြောပါတယ် လုပ်မယ့်ရက်က အကြမ်းအားဖြင့် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ၆ နာရီကြားလို့ လျာထားတယ်လို့ ပြောပါတယ် သစ်သစ်ဟောင်းဟောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် လာခဲ့လို့ရပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ Facebook Event မှာ Response လုပ်ပေးကြပါ စကားပြောလို့ရတာပေါ့။
Thanked by4K Brain Hacker Gipsy linnthitmyat
Only in Myanmar???
ဇွန်လ ၅ ရက်လို့ Update လုပ်ထားပါတယ်
Thanked by2saturngod Gipsy
ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ ဆိုရင် ကျွန်တော်လာလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဇွန်လ ၅ ရက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်မလာနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျား
လာဖြစ်အောင်လာလိုက်ပါ ကိုဒီဘီအေနဲ့ ကိုလူပျို
စေတန်လာမယ့်ရက်ရှိလို့ သူရှိမယ့်ရက်ကို ရွှေ့လိုက်တာပဲဟာ သူရှိတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ကျနော်မရှိတာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး တွေ့ချင်ရင် Video Call နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက် >-
Omg! ကျွန်တော် ရှိတာ ထက် စည်သူ ၊ CalmHill နဲ့ ကို ဒီဘီ တို့ ၃ ယောက် ရှိတဲ့ အချိန်ဆို ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
ကိုစည်သူက အဲဒီနေ့ရှိဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ ကိုဒီဘီနဲ့ ကိုလူပျို လေယာဉ်စီးလာပါ
လေယာဉ်စီးစရာမလိုပါဘူး လက်ဘက်ရည် တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် နင့်ဟာနင်ကားစီးပြီး လှည်းတန်းဘက်လာခဲ့ပါ အခုကရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်
Any idea to share all of your gathering experience on Facebook Live Video?
@Pirson I'm afraid so, they do not even want to makeavideo call for me )
မိုးမရွာရင် Mahabandoola ပန်းခြံ၊ မိုးရွာရင် Mr.Brown, ဘားလမ်းထဲမှာတွေ့မယ်
Call us if you guys arrive.My number is 09974009889